Nyi Mu Yar: ယူအက်စ်ဘီ ပေါ်က ဝင်းဒိုးစ် အိပ်စ်ပီ အပိုင်း (၁)
at Wednesday, July 01, 2009 Labels: MM , Technical Posted by nyimuyar
အခုလိုရှယ်ယာလုပ်တာ ကျေးဇူးပါ၊ xp USB ဒေါင်းလုပ်ရမယ့်နေရာ ရှာလိုက်ဦးမယ်၊
already in my post, coz yesterday night uploading process is on going and now ready to download.
ကျေးဇူးပါ။ ခက်တာက စက်က မပျက်တတ်တော့ စမ်းဖို့ အခွင့်အလမ်း မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ လိုက်ဖတ်နေပါတယ်။ မမန့်ဖြစ်တာကတော့ စိတ်နဲ့ တွေ့မှ မန့်ချင်လို့ပါ။
2 July 2009 at 02:33
If i change my usb to be boot device,
later can i use it as memory stick.Any effect on usb memory storage?
ko boyz: you can test run the live xp, without damage of your OS.
Phyo: no worry, you can use your USB device as memory stick and boot device in the same time. All of my external HDDs and USB sticks are boot devices as well as memory sticks